Wɔde Yeremia too abura mu (1-6)
Ebed-Melek koyii Yeremia (7-13)
Yeremia ka kyerɛɛ Sedekia sɛ ɔmfa ne ho nkɔma Babilonfo no (14-28)
38 Na Matan ba Sefatia, ne Pasur ba Gedalia, ne Selemia ba Yukal,+ ne Malkiya ba Pasur+ tee nsɛm a Yeremia reka kyerɛ ɔman no nyinaa no. Ná ɔreka sɛ: 2 “Nea Yehowa aka ni, ‘Onipa a ɔbɛtena kurow yi mu no, sekan ne ɔkɔm ne nsanyare a edi awu* bekum no.+ Na nea ɔde ne ho bɛkɔ akɔma Kaldeafo no de, obenya nkwa; obenya ne nkwa* sɛ asade* na ɔbɛtena ase.’+ 3 Nea Yehowa aka ni, ‘Nea ɛte biara, wɔde kurow yi bɛhyɛ Babilon hene asraafo nsa, na ɔbɛfa.’”+ 4 Na mpanyimfo no ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Yɛpa wo kyɛw, ma wonkum ɔbarima yi,+ efisɛ nsɛm a ɔrekeka kyerɛ asraafo a wɔaka wɔ kurow yi mu ne ɔman no nyinaa no rebu wɔn aba mu.* Ɔbarima yi mpɛ ɔman yi asomdwoe, na mmom mmusu na ɔrepɛ ama ɔman yi.” 5 Ɔhene Sedekia kae sɛ: “Hwɛ! Ɔwɔ mo nsam, na ɔhene rentumi nyɛ biribiara nsiw mo kwan.” 6 Enti wɔfaa Yeremia tow no kyenee ɔhene ba Malkiya abura a ɛwɔ Awɛmfo Aban mu no mu.+ Wɔde nhama susoo Yeremia mu gyaagyaa no too mu. Ná nsu nni abura no mu; atɛkyɛ nko ara na na ɛwɔ mu, na Yeremia fii ase sɛ ɔremem wɔ atɛkyɛ no mu. 7 Etiopiani Ebed-Melek+ a na ɔyɛ ahemfi panyin* a ɔwɔ ahemfi no tee sɛ wɔde Yeremia ato abura mu. Saa bere no, na ɔhene no te Benyamin Pon no ano.+ 8 Enti Ebed-Melek pue fii ɔhene fi* hɔ, na ɔne ɔhene kɔkasae sɛ: 9 “O me wura ɔhene, nea mmarima yi de ayɛ odiyifo Yeremia no yɛ bɔne kɛse paa! Wɔatow no akyene abura mu, na ɔkɔm no nti obewu wɔ hɔ, efisɛ aduan biara nni kurow yi mu.”+ 10 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ Etiopiani Ebed-Melek sɛ: “Fa mmarima 30 wɔ ha ka wo ho, na munkoyi odiyifo Yeremia mfi abura no mu na wanwu.” 11 Enti Ebed-Melek faa mmarima a wɔka ne ho no, na wɔkɔɔ ɔhene fi* hɔ, na wɔkɔɔ adekoradan no ase+ kɔsesaw ntamagow ne ntama dedaw fii hɔ, na ɔde nhama susoo mu gyaagyaa mu maa Yeremia wɔ abura no mu. 12 Ɛnna Etiopiani Ebed-Melek ka kyerɛɛ Yeremia sɛ: “Mepa wo kyɛw, fa ntamagow ne ntama a wɔatetew mu yi hyehyɛ wo mmɔtoam na nhama no ammia wo.” Na Yeremia yɛɛ saa. 13 Ɛnna wɔde nhama no twetwee Yeremia yii no fii abura no mu. Na Yeremia kɔɔ so tenaa Awɛmfo Aban no mu.+ 14 Na ɔhene Sedekia soma kɔfaa odiyifo Yeremia baa ne nkyɛn wɔ abobow ano kwan a ɛto so abiɛsa no ano wɔ Yehowa fi hɔ. Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ Yeremia sɛ: “Mepɛ sɛ mibisa wo asɛm bi. Mfa biribiara nsie me.” 15 Na Yeremia ka kyerɛɛ Sedekia sɛ: “Sɛ meka kyerɛ wo a, nea ɛte biara wubekum me. Na sɛ mitu wo fo nso a, worentie.” 16 Enti Ɔhene Sedekia kaa Yeremia ntam wɔ kokoam sɛ: “Sɛ́ Yehowa a wama yɛn nkwa* yi te ase yi, merenkum wo, na meremfa wo nhyɛ mmarima a wɔrehwehwɛ wo akum wo* no nsa.” 17 Ɛnna Yeremia ka kyerɛɛ Sedekia sɛ: “Nea Yehowa, asafo Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn no aka ni, ‘Sɛ wode wo ho kɔma Babilon hene mpanyimfo no a, worenwu,* na wɔremfa ogya nhyew kurow yi, na wo ne wo fifo nso bɛtena nkwa mu.+ 18 Na sɛ woamfa wo ho ankɔma Babilon hene mpanyimfo no a, ɛnde wɔde kurow yi bɛhyɛ Kaldeafo nsa, na wɔde ogya bɛhyew,+ na worentumi nguan mfi wɔn nsam.’”+ 19 Ɛnna Ɔhene Sedekia ka kyerɛɛ Yeremia sɛ: “Misuro Yudafo a wɔadan kɔ Kaldeafo no afã no. Sɛ wɔde me hyɛ wɔn nsa a, anhwɛ a wɔne me bedi no nwenweenwene.” 20 Na Yeremia kae sɛ: “Wɔremfa wo nhyɛ wɔn nsa. Mepa wo kyɛw, tie Yehowa asɛm a mereka akyerɛ wo yi, na ebesi wo yiye ama woakɔ so* atena nkwa mu. 21 Na sɛ woamfa wo ho ankɔma wɔn a, nea Yehowa ayi akyerɛ me ni: 22 Hwɛ! mmea a wɔaka wɔ Yuda hene fi* nyinaa, wɔde wɔn bepue akɔma Babilon hene mpanyimfo,+ na wɔbɛka sɛ,‘Nnipa a wode wo ho too wɔn so no* adaadaa wo, na wɔadi wo so.+ Wɔama wo nan amem wɔ atɛkyɛ mu. Na wɔadan wɔn ho kɔ.’ 23 Na wɔde wo yerenom ne wo mma nyinaa bepue akɔma Kaldeafo no, na worentumi nguan mfi wɔn nsam. Babilon hene bɛkyere wo,+ na wo nti, wɔde ogya bɛhyew kurow yi.”+ 24 Ɛnna Sedekia ka kyerɛɛ Yeremia sɛ: “Mma obiara nnte asɛm yi ho hwee, na woanwu. 25 Na sɛ mpanyimfo no te sɛ me ne wo akasa, na wɔba wo nkyɛn bɛka kyerɛ wo sɛ, ‘Yɛsrɛ wo, ka asɛm a woka kyerɛɛ ɔhene no kyerɛ yɛn, mfa hwee nsie yɛn, na yɛrenkum wo,’+ na sɛ wobisa wo sɛ ‘ɛdɛn na ɔhene ka kyerɛɛ wo?’ a, 26 ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Adesrɛ na mede kɔtoo ɔhene anim sɛ ɔnnsan mmfa me nnkɔ Yehonatan fi hɔ bio na manwu wɔ hɔ.’”+ 27 Akyiri yi, mpanyimfo no nyinaa baa Yeremia nkyɛn bebisabisaa no nsɛm. Na ɔkaa asɛm a ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ ɔnka nkyerɛ wɔn no nyinaa kyerɛɛ wɔn. Enti wɔne no anka hwee bio, efisɛ obiara ante ɔne ɔhene nkɔmmɔ no. 28 Na Yeremia kɔɔ so tenaa Awɛmfo Aban no mu hɔ kosii da a wɔko faa Yerusalem.+ Bere a wɔko faa Yerusalem no, na ɔda so wɔ hɔ.+
^ Anaa “biribi a wɔanya wɔ ɔko mu.”
^ Nt., “rema wɔn nsam agow.”
^ Anaa “opiani.”
^ Anaa “ɔbɔɔ yɛn kra.”
^ Anaa “wo kra bɛtena nkwa mu.”
^ Anaa “wo kra akɔ so.”
^ Nt., “Nnipa a wo ne wɔn te asomdwoe mu no.”